स्कालोप (अब्खाजियन् - Anyhansta) - अहिलेसम्म सानो-जानिन्छ, तर अब्खाजिया को काला सागर तट मा कुनै कम शानदार रिसोर्टमा शहर। Unspoiled प्रकृति, विशाल समुद्र, शान्त वीरान तटों र अब्खाजिया यस आरामदायक कुना को विशिष्टताको यहाँ फेरि फेरि इशारे ...
एक संक्षिप्त digression
अब्खाजिया स्कालोप को गणतन्त्र मा - एउटा सानो गाउँमा, तरिकाले भएको Gagra सीमा को रक्स मा बाहिर फैलियो। को eponymous जिल्ला स्थित। बस भन्दा 500 मान्छे (Abkhazians, आर्मेनियालीहरूको र यूक्रेनियन, युनानी र रूसी एउटा सानो प्रतिशत भन्दा अलि बढी) आज गाउँमा घर हो।
यो बन्दोबस्त बारेमा धेरै दन्त्यकथा। एक सुन्दर र रहस्यमय को - को बारेमा ओल्डेनबर्ग को राजकुमार। आफ्नो महल prying आँखाबाट greenery मा लुकेको छ। तिनीहरूले धेरै प्रभावशाली व्यक्ति हाथीदांत कोर्नु, बहुमूल्य पत्थर संग studded गुमाए भन्छन्। उहाँले समुद्रको अँध्यारो पानी मा हराए। हानि धेरै भएको महिला द्वारा saddened छ, र त्यसपछि राजकुमार उसलाई एक उपहार रूपमा भूमि को एक टुक्रा एकांत हवेली उसलाई "स्कालोप" को शीर्षक दिएर दिनुभयो।
गणतन्त्र अब्खाजिया को अतिथि लागि सूचना, स्कालोप
अब्खाजिया को कुनै पनि क्षेत्र मा रूसी मुद्रा जान्छ। 2012 देखि हामी भुक्तानी प्रणाली भिषा काम शुरू, मास्टर कार्ड। तर अझै पनि एटीएम धेरै सानो, तिनीहरूले बैंकहरू को क्षेत्र मा मुख्य रूप स्थित छन्, त्यसैले यसलाई नगद छ राम्रो छ।
पसलमा एक दुर्लभ टर्मिनल भुक्तानी भएको छ। देश मा मुद्रा राम्रो बोक्न छैन। उनको हार्ड परिवर्तन गर्नुहोस्।
मानक गर्मी मौसम मई मा अब्खाजिया मा सुरु र अक्टोबर को अन्त तिर समाप्त हुन्छ।
मई मा, सूर्य पानी समुद्र (एक अवैतनिक लागि) सुन्दर छ अझै पनि, बाल्न छैन। तर आराम न्यानो र हावा aromas भरिएको छ। जडीबुटी, रूखहरू र रंग को एक महान विविधता blooming। यो समयमा एक कारण वा अर्को लागि गर्मी सहन सक्ने छैन पर्यटकहरूको लागि एउटा राम्रो बाँकी। मौसम को "स्विंग" को यो अवधि, मान्छे सानो, त्यसैले रमाइलो गर्न पैदल छ।
जुन मा - जुलाई को शुरुवात, यो मध्यम गर्मी र स्नान सिजन सुरु प्रेमीहरूलाई समय छ।
अब्खाजिया को गणतन्त्र मा तातो सिजन - जुलाई र अगस्ट मा। कुनै अपवाद स्कालोप। यो गर्मी को एक वास्तविक भीड छ। Scorching सूर्य, पानी - उम्लिरहेको पानी, केवल छाया मा सुन्दर।
अब्खाजिया (स्कालोप) गर्मी घट्ने को स्कूल गणतन्त्र मा पहिलो महिनाको मध्य र पर्यटक संख्या द्वारा। फेरि, शान्त आरामदायक र सहज बन्नेछ। दिन को समयमा यो अझै पनि एकदम तातो छ, र सांझ अब एक कम्बल मा आफैलाई र्याप गर्न चाहन्छु।
लुगा लागि जाँदा, एक अलिखित कडा स्नान सूट, छोटकरीमा, सुझाव समुद्रीतट विशेष थकित टप्स गणतन्त्र गरेको बासिन्दा शासन। शहर, सहर, स्टोर, बैंकहरू र ऐतिहासिक महत्व विशेष गरी ठाउँमा उपयुक्त वस्त्र लगाउन आवश्यक छ। र तपाईं हिमाल मा पदयात्रा गर्न छ भने, तपाईं न्यानो लुगा हेरचाह गर्न आवश्यक छ।
अब्खाजिया, राम्रो तरिकाले-विकास परिवहन पूर्वाधार मा। उपलब्ध धेरै बस मार्गहरू, मार्ग र निजी ट्याक्सी छन्।
एक सानो-ज्ञात शहर शान्त र एकांत बाँकी अनुमति दिन्छ। यसलाई यहाँ Gagra शहर देखि पाँच मात्र किलोमिटर र सीमा 15 र पर्यटक थोडा जस्तो देखिन्छ।
अतिथिहरूको स्कालोप गाउँ (अब्खाजिया) समीक्षा वस्तुतः समान बायाँ "गल्ति हिट (वा रूपमा सिफारिस गरिएको) र अब हामी हरेक गर्मी यहाँ आराम हुनेछ ..."
त्यहाँ साँच्चै राम्रो हो। प्रकृति लगभग, जंगली Untouched छ। आरामदायक शान्त परिवार रिसोर्टमा। नजिकैको ठूलो छुट्टी घरमा वा स्वास्थ्य केन्द्र र मनोरंजन छन्। यहाँ शहरी bustle र trudobudni खराब सपना जस्तै भूल।
अब्खाजिया, स्कालोप को गणतन्त्र मा, फोटो यस तथ्यलाई, "लुकेका" खाडी मा पुष्टि गर्नुहोस्। यो भौगोलिक स्थान यसको गाउँ संग तट मा स्थित छ कारण राम्रो आँधी छालहरू र आँधी बादल सुरक्षित। पनि वर्षा ड्राई scallops र अनुग्रह मा एडलर र Gagra मा खन्याउन गर्दा।
गेस्ट हाउस मा अपार्टमेन्ट
अतिथि कोठा one- पाँच ओछ्यानमा-र पृथक bungalows, greenery द्वारा sheltered द्वारा तयार छन्। अब्खाजिया को गणतन्त्र (Scallops गाउँ) को अपार्टमेन्ट को विवरण साँचो हो को पर्यटक साइटहरु मा, गणतन्त्र को अतिथि आश्वासन।
स्तर bungalows सामान्यतया दुई अलग कोठा, तीन वा चार व्यक्ति हुन्। लगभग हरेक कोठा मा एक शौचालय, शवर, चिलमची छ। यो सुइट्स - टिभी, कंडीशनिंग र रेफ्रिजरेटर हावा। एक छत वा साँझ जमघट लागि आँगन छ यकीन हुनुहोस्। सबै अतिथि घरहरू चिसो पानी ल्याइएको हो गर्न, त्यहाँ एक बयलर छ निश्चित गर्नुहोस्। कुनै पनि विन्डो आश्चर्यजनक दृश्य देखि, या त विशाल समुद्र वा रसीला साग मा, माथि विदेशी दारिम, नेभाराको, आदि संग दाखबारी र उद्यान छोडेर वा
र यहाँ असाधारण sunsets र sunrises।
समुद्र - बाटो को एक सुविधाजनक पैदल दूरी मा, लगभग सीधा greenery जोडतोडले। सुन्दर छुट्टी अब्खाजिया संग अतिथि प्रस्तुत।
नरम बालुवा, अन्य - - Scallops गाउँमा अचम्मको प्राकृतिक उपहार, समुद्र तट को एक भाग दावा मध्यम आकारको पेबल्स।
धेरै पर्यटकहरु ताजा खानेपानी चिन्तित छन्। को scallops यो समस्या हल हुन्छ। यहाँ, पानीका मुहानहरू को र ठूलो पानी कुञ्जीहरू (शहरी पेय, अमृत पछि) संग एक अधिकता।
अतिथि घरहरू र तिनीहरूलाई नजिकै पार्किङ धेरै सुरक्षित छन्।
अतिथि घरहरू द्वारा प्रदान सबै लाभ अलग्गै, पर्यटकहरूले अतिथि घरहरू मा भान्सा महिमा। आगमन मा, केही vacationers किनभने आत्म-खानपान मा प्रतिबन्ध को दुखी छन्। Housewives देखि व्यञ्जनहरु को एक थान सबै लगभग छोड!
भाँडा छैन मात्र आश्चर्यजनक स्वादिष्ट - तिनीहरूले ईश्वरीय सेवा गरेका छन्।
उत्पादन गाउँमा को छिमेकी मा पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री किन्न। त्यसैले, सबै कुरा सधैं ताजा र सुन्दर स्वादिष्ट छ। एक दिन, घर (यसलाई सधैं जोड) तीन भोजन। 10 वर्ष मुनिका बच्चाहरु प्रदान खाना मा छुट। तपाईं यस्तो कुरा को केहि चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले (बस नजिकैको रोक्न) Gagra मा किनमेल लागि जान सक्नुहुन्छ।
यात्राहरु, पैदल यात्रा र विभिन्न कारणहरूले गर्दा अन्य absences मा अतिथि को प्रस्थान मा अतिथि घरहरू को Mistress, "takeaway" जा रहेको छ।
हलचल शहर पछि वीरान छन् र शान्त बस मेरो कान मा घन्टी। को अब्खाजिया (स्कालोप) को गणतन्त्र निजी मूल्यहरु र आतिथ्य संग आनंद से खुसी क्षेत्र मा। गाउँमा पाहुना को सुविधाको लागि प्रमुख अन्तर्गत मात्र अतिथि घरहरू र घरहरू, तर पनि निजी क्षेत्र मा धेरै सस्तो बेड छैन।
र तपाईं बीच एक ब्रेक चाहनुहुन्छ भने, तपाईं छिमेकी वरिपरि लक्षविना हिड्नु गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, (सय एक भन्दा बढी वर्ष उहाँलाई) ओल्डेनबर्ग को राजकुमार को रहस्यमय महल अन्वेषण गर्नुहोस्। सामान्यतया Gagra जिल्ला जहाँ तपाईं बच्चाहरु संग जान सक्नुहुन्छ बाँकी को रोचक ठाउँहरू, मा धनी छ। ले, उदाहरणका लागि, एउटा यात्रा लेक Riza , वा प्रसिद्ध रेस्टुरेन्ट "Gagripsh" एउटा भ्रमण! उहाँले एक निर्माता रूपमा, संकलित - यो एक नङ छैन! जाँचको पछि स्वादिष्ट र सस्तो खाना हुन सक्छ।
Gegsky झरना छैन भिक्टोरिया, पाठ्यक्रम, तर अचम्मको को अमरीकी। पानी बाध्यकारी गुफा मा इन्डोर क्याफे संग नीलो ताल। Hypatia। यो मानव हात द्वारा नदी र Tsiherva को बेसी मा स्थित छ। यो धेरै कोठा थिए विश्वास छ, तर आज मात्र तीन अरूलाई bombarded छन् खुला छन्। बिशप Hypatia Gagra लुकाउने गुफाको मा अर्थोडक्स मसीहीहरूलाई सताउन को संकट को समय मा।
को Colonnade गर्न भ्रमण दुवै बच्चाहरु र वयस्क fascinates। यो सानो आर्केडहरू जोडिएको छन् चार टावर हुन्छन्। परिसर को 60 भन्दा बढी पु को कुल लम्बाई। आज यो शहर Gagra सबैभन्दा भ्रमण ठाउँहरू मध्ये एक हो। Colonnade संग सम्पूर्ण शहर समुद्र तट को तेजस्वी दृश्य प्रदान गर्दछ। परिसर को दृष्टि को बाँया मा समुद्री तट पार्क गर्न प्रवेश छ। सीधा colonnade विपरीत अब derelict सिनेमा निर्माण खडा। एक पटक यो भवन प्रवेश मा सर्पिल staircases र सुन्दर सिंह प्रशंसा।
वार्षिक छुट्टी (अब्खाजिया, स्कालोप) मात्र अग्रिम आरक्षण संख्या को मामला मा सफल हुनेछ। सामान्यतया दैनिक चयन नम्बर लागि अपार्टमेन्ट को लागत - - प्रस्तावित विद्युतीय पर्स वा मालिकहरूको बैंक खाता यसो गर्न, तपाईं निक्षेप रकम हस्तान्तरण गर्नु पर्छ। को तैयार एक गेस्ट हाउस को साइटमा छ। धन होस्टहरूको कोठा को रसिद को पुष्टि पछि बुक गरिएको छ। यहाँ, कोठा को मालिक कृपया कारणहरू को तथ्यलाई याद जम्मा गैर-फिर्तीयोग्य छ, कुनै कुरा के। तर यो आवास र भोजन लागि अन्तिम रकम बाट कटौती गरिनेछ।
को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री अन्यथा उल्लेख यदि कोठा को लागि आरक्षण, मा आगमन को सहमत दिन 23:59 सम्म आयोजना गरिन्छ।
आगामी गर्मी मौसमको लागि आरक्षण यस वर्ष को फेब्रुअरी सुरु हुन्छ।
के तपाईं साँच्चै सान्त्वना र coziness मा अगाडी वर्ष को लागि स्मरण र भावना प्राप्त गर्न, समुद्रको मौन मा आराम गर्न र उत्सुकता अर्को गर्मी लागि प्रतीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं जान अब्खाजिया को गणतन्त्र छ छ। scallops लागि प्रतीक्षा गर्दै।
इभ्यानोभो सर्कस: सबै एक बच्चाको रूपमा
ब्रेमेन आकर्षण र सफल व्यवसायी शहर इतिहास
यात्रा स्पेन: Sitges र यसको सुविधाहरू
सुखद शब्दहरू मान्छे। के शब्द राम्रो मान्छे लेख्न?
को तोरी सन्तानको दृष्टान्त
Contactless tonometry: तयारी, परीक्षा र परिणाम
एक विस्फोट के हो? परिभाषा र विस्फोट को वर्गीकरण